Tracksuits ho an'ny vehivavy
Ny fomba fiaina ara-pahasalamana dia teo amin'ny mailaka foana, na izany aza, raha taona maromaro lasa izay dia afaka nahita lehilahy vao haingana fotsiny ny lehilahy, ary ny fikojakojana ny vatana dia nanjary ampahany manan-danja amin'ny fiainan'ny vehivavy rehetra.
Ankoatra izany ao amin'ny tontolo maoderina, ny firaisana ara-drariny dia tokony ho mpikarakara tokantrano tsara, manam-pahaizana matihanina eo amin'ny toeram-piasana, ary ny reny mikarakara ny zanany. Ao anatin'ireo grafika sarotra toy izany dia zava-dehibe ny mijery ny lamaody sy ny hatsaran-tarehy, fa koa ny mendrika. Ireo toetra rehetra ireo dia mifamatotra amin'ny fanatanjahatena fanatanjahan-tena vehivavy, izay horesahina any aoriana.
Vehivavy mijery vehivavy
Inona no tokony hataon'ny vehivavy iray amin'ny fitondran'ny vehivavy maoderina tsy hampionona afa-tsy amin'ny fampiononan'izy ireo, fa ny mason'ny hafa koa? Andao hodinihintsika ny sasany amin'ireo modely tena mahaliana:
Ny safidy tsara indrindra ho an'ny vehivavy dia mety ho akanjo fitafy Adidas . Miankina amin'ny karazana tarehimarika sy ny safidinao manokana, azonao atao ny mifidy ny modely tsara indrindra. Ny mozika mahomby indrindra dia mainty / mavomavo miaraka amin'ny mavomavo mamiratra. Satria ny kiraro dia marefo fotsy fotsy na mavokely. Vita amin'ny lamba voajanahary, ny fitondran'i Adidas dia mety ho lasa zavatra mahafinaritra ao am-baravaranao.
Ny akanjo ara-panatanjahan-tena, izay misy lobaka maingo na kapoty ary mifanohitra amin'ny pantalonan'ny lokony, dia mijery ny lamaody sy ny lamaody. Ny mpitsikilo amin'ny haingam-pandeha dia hameno fotsiny ny sarinao.
Ny iray amin'ireo modely tsara indrindra amin'ny vanim-potoana vaovao dia ny kitapo miaraka amin'ny pataloha henjana sy ny jiromotra amin'ny bibilava. Ny kapa ho an'ny singa toy ny stylist ny poketra dia manoro ny fisafidianana ny kodiarana, izay manenika ny ranjany ary mahatonga ny sary ho vavy kokoa.
Ho an'ny vanim-potoana mangatsiaka sy ny toetr'andro, dia tsara ny mividy akanjo mafana tsara ho an'ny vehivavy, vita amin'ny volon'ondry na amin'ny sintepone. Toy ny kiraro, dia mendrika ihany koa ny fisafidianana snikers na haytops.
Tracksuits ho an'ny vehivavy feno
Ny sokajy samihafa dia fanatanjahantena ara-panatanjahantena ho an'ireo vehivavy "plus". Amin'ny fividianana dia zava-dehibe ny handinihana karazan-tarehimarika iray ary avy eo dia haverina:
Ny vehivavy manana olana ao amin'ny kibony dia voatery hisafidy akanjo maromaro mitovitovy amin'ny loko mifanandrify fotsiny eto amin'ity faritra ity. Noho ny lantihy mamirapiratra toy izany, dia mihena ny tavy.
Ny solontenan'ny fananahana malemy miaraka amin'ny soroka goavana, ny mpahaingo lamaody dia manoro hevitra amin'ny fanatanjahantena ara-panatanjahantena amin'ny volo, izay hanampy amin'ny fanalefahana ny tampony ary hampitombo kokoa ny sisa amin'ny vatany.
Afaka omena torohevitra ny tompon-tany amin'ny andrin-jiro amin'ny fividianana akanjo miaraka amin'ny panty. Amin'ny alalan'ity fomba ity, azonao atao ny mampifandanja ny tampony sy ny ambany, ary manafina ny fahadisoana kely eo amin'ny sary.
Sarafany mainty miaraka amin'ny dantelina
Fehikibo lamba amin'ny dantelina
Vehivavy mainty ririnina
Akanjo mafana amin'ny kapa
Miakanjo amin'ny voninkazo
Tanora japoney - mamorona tsipìka maingoka isan'andro
Mpifanolo-bodirindrina vetivety - sary vitsivitsy amin'ireo modely modely
Hazo maitso avy amin'ny Scaftaftel
Sary tonika ho an'ny tarehy
Ahoana ny fisafidianana ny fahitalavitra mety - inona no karazam-pahaizana maoderina tsara kokoa?
Fangatahana fampakaram-bady ho an'ny maso maitso
Ahoana no ahafahana manala marika maromaro aorian'ny fiterahana?
Sary miloko Violet eo afovoany
Inona no zava-manitra natolotra ho an'ny hena?
Nahoana ny maso no mifehy ny bata?
Navoakan'i Celine Dion ny sarin'ny Krismasy miaraka amin'ireo zanany lahy
Artichoke - maniry avy amin'ny voa, fitsipika momba ny fambolena sy fiahiana ny zana-ketsa
Ahoana no nisehoan'ny fanafody?
Afaka mikarakara ny nifiko ve aho mandritra ny fitondrana vohoka?
Bay leaf isan-kerinandro
Fanosotra masira miaraka amin'ny akoho
Valam-pirenena ao Soeda